Mmeputa nke ulo oru - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Home World Group bụ onye nrụpụta kasịnụ na mbupụ nke plywood na ngwaahịa ndị metụtara ya na China, nke hiwere na 1993 nwere ndị enyemaka 6. Ugbu a, anyị na-ekpori ndụ usoro ihe nkiri 73 nke plywood fancy plywood na LVL. Na ụlọ ọrụ nkwonkwo ngwaahịa 12 na OSB, MDF na melamine board rụpụtara.
ROC International bụ ụlọ ọrụ ọrụ mbubata na mbupụ na Home World Group.
Anyị arụpụtaghị nile di iche iche nke osisi panel bụ 1,000,000m3 kwa afọ. Ejiri ọtụtụ igwe dị elu, Italian IMEAS sanders, Japanese UROKO peeling machines, Veneer Joint Tenderizers na nnukwu akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ịmịpụta na mbupụ ngwaahịa kachasị mma na ihe nkiri a na-eche ihu plywood, plywood mara mma, plywood antiskid, MDF, OSB na ngwaahịa LVL.
Na mbu ahia azu ahia, emere osisi osisi ROCPLEX site na IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU, JAS-ANZ ma rekwaa nke kariri mba 100 n’uwa nile, dika Germany, Australia, USA, Chile, Libya, UAE, Saudi Arabia, Korea, Japan, wdg.
Na china obodo ahịa, ROC si anụ ụlọ ika malali ama na china ụlọ saịtị na n'ụlọ mma ahịa.
Ndi mmeri nke "Akara Akara Ahuru nke China", "Ngwa ahia Jiangsu Kwadoro" na "AAA Corporate Ebe E Si Nweta"
Na ebumnuche nke inye nri maka ihe ahịa nke ụwa zuru ụwa ọnụ, anyị ejikọtara ya na ndị na-ere ihe ụlọ ama ama na ụlọ ahịa na-ewu ewu, anyị nwere ọrụ ịhazi na OEM maka ogwe osisi ha na arịa ụlọ.
Bengding osisi plywood
Zhengquan osisi Co., Ltd.
Zhanpeng osisi Co., Ltd.
Ihe owuwu nke Senso co., Ltd.